कांग्रेस महाधिवेशन र डा. शेखर कोइराला « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : १४ मंसिर २०७८, मंगलवार १२:३२
पार्टीलाई क्रियाशील र जीवन्त राख्न त्यस पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जीवन्त पार्टीमा क्रियाशील नेतृत्व सक्षम भयो भने त्यस पार्टीमा रहेका कार्यकर्ताहरु पनि इमान्दार हुन्छन् । नेतृत्वपंक्ति खराब र आशक्त देखिए तल्लो स्तरका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले क्रमशः साथ छोड्दै जान्छन् भने समर्थनसमेत गर्न छोड्छन् ।
नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र अहिले जीवन्त नेतृत्वको अभाव खट्किरहेको छ भने युवापंक्तिले सबल र सक्षम नेतृत्वको खोजी गरिरहेको देखिँदैछ । राजधानीमा बसेर र बालुवाटारमा पसेर नितान्त व्यक्तिगत तथा समूहगत फाइदाका लागि राजनीति गरिरहेका वर्तमानका नेतृत्वकर्ताहरुले अब आउने महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा व्यापक परिवर्तनको आवाज उठाइरहेका छन् भने त्यसका लागि युवाहरु समेत नेतृत्व तहमा धमाधम आइरहेका पनि देखिन्छन् ।
कम्युनिष्टको बुई चढ्दैमा सधैं सरकारको स्वाद चाख्न पाइन्छ भन्ने न्यारो माइन्ड भएका र प्रचण्डकी छोरी, बुहारी बोकिदिएबापत उपहारमा पाएको सत्ताको न्यानोपनामा रमाउन पल्किएको वर्तमान कांग्रेसको थला परेको नेतृत्वलाई अब आउन लागेको चौधौं महाधिवेशनबाट पाखा लगाउन पनि नेपाली कांग्रेसभित्र सशक्त र जुझारु युवा नेताहरु अहिले एकताबद्ध भएर अगाडि आइरहेका छन् । यसले अब निकट भविष्यमा हुन लागेको नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन इतिहासकै ऐतिहासिक महाधिवेशन हुनेमा अब शंका गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।
सधैं कम्युनिष्टको बुई चढेर वर्तमान कांग्रेस हिँड्न चाहँदैन भन्ने कुरा वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वले बुभ्mन नसक्दा नेपाली कांग्रेस अत्यन्तै ठूलो जनाधार भएर पनि सधैं दोश्रो हुनुपरेको अवस्था छ । अहिलेको कांग्रेसको युवा नेतृत्व अब कम्युनिष्टको पुच्छर बन्न चाहँदैन । आफ्नै बलबुतामा नेपाली कांग्रेसलाई सशक्त र शक्तिशाली बनाउन चाहन्छ । कांग्रेसभित्रको कुँडिएको मनमा मीठास भर्न चाहन्छ । तर यो पनि सत्य हो अहिलेको नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व युवाहरुको चाहना अनुरुपको कांग्रेस बनाउन र कम्युनिष्टहरुको भीडको राजनीति गर्ने जत्थासँग भिड्न पनि सक्दैन ।
नेपाली कांग्रेस इतिहासमै अत्यन्तै कमजोर मोडमा पुर्याएर पनि आफूलाई महान राजनेता मान्नेहरुको एउटा समूह अझै पनि नेपाली कांग्रेसको चार तारे झण्डा र चुनाव चिन्ह रुखलाई भजाएर पुस्ताको बैतिरणी तर्ने अभियानमा क्रियाशील भइरहेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वमा पनि यो मुलुक महामानव विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले परिकल्पना गरेबमोजिम किन अघि बढ्न सकेन ? भनेर स्व–मूल्यांकन गर्दा र यस्तै नेतृत्वले नेपाली कांग्रेसलाई माथि आउन नदिएको राज विस्तारै खुल्दै जान थालेपछि युवा नेतृत्वले हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाउन थालिसकेका छन् ।
गेम जित्नुभन्दा पनि म्याच फिक्सिङ्ग गर्दा बढी फाइदा देख्ने खेलाडी झैं बनेको वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वबाट अब पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन । अब पनि युवाले हिम्मत गरेर नेतृत्व खोस्न नसके यो देश कहिल्यै पनि बन्दैन । आफ्नै दलको महाधिवेशन रोक्नका लागि विभिन्न बहानाबाजी खोज्दै हिँड्नेदेखि देशभित्रै डु«ङ्डुङ्गती गन्हाएका नेतृत्वसँग समेत अघाइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व दर्बिलो भएन, अब नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नलाई पनि कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई किन डर छ ? के वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वबाट कांग्रेसले नयाँ जीवन पाउन सक्छ भन्ने कसैलाई भर छ ? पार्टी बिगारेर रसातलमा पुर्याउने वर्तमान कांग्रेस सभापतिबाट कांग्रेस हरिलो भरिलो बन्न सक्दैन भन्न के को डर छ ?
नेपाली कांग्रेसलाई देशकै शक्तिशाली बनाउँदै देशको चौतर्फी विकासका योजना बनाउन सक्ने योजनाकारहरुलाई पार्टीले कहिल्यै छेवै पर्न नदिएका कारण अहिले नेपाली कांग्रेस बास्तवमै योजनाविहीन पार्टीको रुपमा देखिएको छ । इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ताहरुले देश र जनताको विकासका लागि दिएको सुझाव र सल्लाह वर्तमान कांग्रेस सभापतिको सानो समूहले कहिल्यै पनि लिएन । जनता दुई छाक खान नपाएर सडकमै भौंतारिनु पर्दा पनि वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अभिभावकत्व कहिल्यै पनि लिएन । प्राकृतिक विपत्तिका कारण किसानको बाली सर्वनाश हुँदा पनि अहिलेसम्म कुनै प्रकारको राहतसमेत दिएन । मल नपाएर किसानको खेतमा बाली लाग्न नसक्नु योभन्दा लज्जाबोधको अर्को कुन उदाहरण प्रस्तुत गर्नु पर्ला र ?
एकपटक विचार गरौं त यो देशमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका शहिदहरुले के भनेर र कसको भलाइका खातिर हाँसिहाँसी आफ्नो बलिदानी दिएका थिए ? आफ्नो सर्वस्व हरण भएर पटक पटक जेल र निर्वासनमा जीवन बिताएका अग्रजहरुले कस्तो कांग्रेसको परिकल्पना गरेका थिए ? किन आफ्नो घरबार त्यागेर र सर्वस्व गुमाएर देश र जनताका लागि आफूलाई समर्पण गरे ? यसको कुनै पनि हेक्का समेत वर्तमान नेपाली कांग्रेसको गतिछाडा नेतृत्वले राखेको पाइँदैन । शहिदहरुले देखाएको मार्गमा हिँड्न किन नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वलाई डर लागिरहेको छ ? भ्रष्टाचारको आरोपमा वर्तमान नेतृत्वमा रहेका को को नेताहरु परिरहेका छन् ? बास्तवमा यसले नेपाली कांग्रेसलाई कतातिर लगिरहेको छ ?
केवल श्रीमती र ससुराली अनि आफन्त र नातागोताका लागि मात्रै उपयोगको साधन बनेको नेतृत्वका पछाडि लागेर अब पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व हिँड्न खोज्छ भने वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको हवगत पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको झैं हुनेमा अब दुईमत छैन । नेपाली कांग्रेस राणाहको दबदबा भएको बेलामा जन्मिएको पार्टी हो । देउवा जस्ता देशका क्यान्सरहरुको पछाडि अब लाग्ने छैन भन्ने सन्देश नेपाली कांग्रेसको भर्खरै सम्पन्न वडा, जिल्ला, गाउँ, नगर, प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनहरुले देखाइसकेका छन् । केबल आफ्नो जित सुनिश्चित गर्नका लागि एकलौटी रुपमा थपिएका शतप्रतिशत क्रियाशील सदस्यहरुको समूहले पनि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहज नेतृत्वमा अवतरण गराउन सक्ने अवस्था देखिएन भने सोचौं त नेपाली कांग्रेसमा वर्तमान देउवा नेतृत्वप्रति कति वितृष्णा र आक्रोश रहेको छ भनेर ?
त्यसैले देउवा नेतृत्वको नेपाली कांगेसले जे गर्दा पनि अब नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरु चुप लागेर बस्छन् भन्ने छैन । अबको महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व डा. शेखर कोइरालाले गर्नेछन् । यो कुरा भने पक्का हो अब नेपाली कांग्रेसका तमाम नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आफू नेपाली कांग्रेस भएकोमा गर्व गर्नेछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, शान्ति, सुरक्षा र दिगो विकासमा देशले फड्को मार्नेछ । नेपाली कांग्रेसलाई विधि र पद्धतिका आधारमा अगाडि बढाउँदै निष्ठा र आदर्शको राजनीति स्थापित गराउने नै भावी सभापति डा. शेखर कोइरालाको राष्ट्रिय अभियान हुनेछ । केबल बिग्रिएको र बाटो छाडेको कांग्रेसलाई सुधार गर्दै सही मार्गमा हिँडाउन मात्रै सके पनि नेपाली जनजनका मनमुटुमा बसेका नेता डा. शेखर कोइरालाको देश विदेशमा जयजयकार हुनेछ ।